Cawska loo yaqaan 'pears' | February 2020
Ugu Weyn Ee Cawska loo yaqaan 'pears'
Xeerarka dhirta iyo daryeelka ee "Cathedral" pear
Waxaa jira noocyo kala duwan oo isteroberi ah. Waxaa jira noocyo caan ah oo si weyn loo jecel yahay, waxaana jira noocyo la caddeeyey oo ku guuleystay ixtiraam darro ka timid bannaanka. Ugu dambeyntiina, marwalba waad hubsan kartaa. Wakiil caan ah oo ka mid ah noocyada kala duwan waa pear cathedral. Pear Cathedra, sharraxaadda kala duwan Tani waxay kala duwan tahay tan 1990
Tilmaamo isdaba-joog ah oo ka soo jeeda nooc "Lyubititsa Yakovleva"
Maqaalkani waxaan diiradda saari doonaa nooca pear "Lyubimitsa Yakovleva." Waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee kaa caawin doona inaad gasho oo aad u korato geedkan midhaha leh. Pear "Favorite Yakovlev", Macluumaadka guud Ka hor inta aanad ku beerin "Pure Yakovlev" waa inaad akhrido sharaxaad gaaban oo kala duwan oo aad ku ogaatid xaqiiqooyin taariikheed oo xiiso leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cawska loo yaqaan 'pears' 2020